अर्थमन्त्रीको प्रश्‍न : एउटा पुस्तकमा ३०/४०% नाफा खाने, १०% कर तिर्न नमान्‍ने ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अर्थमन्त्रीको प्रश्‍न : एउटा पुस्तकमा ३०/४०% नाफा खाने, १०% कर तिर्न नमान्‍ने ?
काठमाडौँ — अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले पुस्तकको कारोबार व्यापार नै भएकाले यसमा सरकारले कर उठाउने कुरा जायज भएको बताएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री खतिवडाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वदेशी प्रेस तथा छापाखानाको संरक्षणका लागि विदेशबाट आयातित पुस्तकमा कर
लगाउने निर्णय गरिएको बताए। अरु देशहरुमा पुस्तकमा १८ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरिएको उदाहरण दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘धेरै देशमा पुस्तकमा १८ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका छन्। हाम्रो देशमा अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरेर प्रेस र छापाखाना स्थापना गरिएको छ। उनीहरुले मेसिन र कागज दुवैमा कर तिर्नुपर्छ। करै नतिरी ल्याउने पुस्तकसँग उनीहरुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्?’
पुस्तक विक्रेताको प्रश्न : नाकामा रोकियो पुस्तक, सरकारले गर्न खोजेको के?